चिनिया जहाज दोस्रो लाउडा भएका छन् - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
16th July 2018, Monday
चिनिया जहाज दोस्रो लाउडा भएका छन् - राजनप्रसाद उप्रेती, अध्यक्ष नेपाल वायुसेवा निगम, कर्मचारी युनियन
० झन्डै एक महिना भयो तपार्इं युनियनको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको, युनियनलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
–साथीहरूले हामीप्रति दर्साएको भावना र विश्वासको मतलाई उच्च कदर गर्नुपर्नेछ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको संस्था सुधार नै हो । संस्था सुधार गर्न हामीलाई हवाईजहाज नै चाहिन्छ । दुईवटा बोइङहरू करिब ३० वर्ष पुराना भएका छन् । त्यसैले, नयाँ वाइड बडी जहाज तत्काल ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो ल्याउन हामी जोडदार रूपमा लाग्यौं । कर्मचारी युनियनकै पहलमा बजेटमा पनि यो योजना परेको छ । २५ अर्ब बजेट छुट्टिएकाले यही वर्षभित्र कार्यरूप पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
० निगमको आर्थिक अवस्था निराशाजनक छ, तलब खानै पनि सरकार जमानी बसेर ऋण लिएको भनिन्छ, तैपनि आर्थिक अनियमितता र चलखेल उस्तै छ भनिन्छ नि ?
– निगममा तलब खान नै बाहिरबाट पैसा ल्याउनुपरेको छैन । मैले जागिर खाएको ३१ वर्ष भयो । सधैं समयमै तलब पाइरहेको छु । धराशायी भयो भनेको धेरैपटक सुनियो । तर, हामी नाफामै छौं । गत साल पनि हामीले २१ करोड नाफा कमाएको हौं । हामी घाटा परेको लाउडा एयर ल्याउँदा मात्रै हो ।
० त्यसको निर्णय हुँदा तपाईंहरूले के हेर्नुभयो त ?
– हामीले लाउडा एयरको निकै विरोध ग¥यौं । त्यसलाई कुनै हालतमा ल्याउनै हुन्न भनेर हामीले जोडदार आन्दोलन गरेका थियौं । नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघका अध्यक्षसहित त्यो एयर ल्यान्ड गर्न लाग्दालाग्दै चार–पाँच तहका मान्छेहरूलाई पनि विदेश पठाउने प्रलोभन देखाएर पोस्टिङ गरियो । हामीले सुरु गरेको आन्दोलनलाई भड्काउने काम भयो । उहाँहरू पोस्टिङ गए पनि हामीले आन्दोलन गरिरहेकै थियौं । युनियनकै पहलमा लाउडाको चक्कामा समेत ‘गो ब्याक लाउडा’ भनेर इनामेलले लेखेर सारा हत्कण्डा गरेर, पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फर्काउन सफल भयौं । त्यति गर्दागर्दै पनि निगमलाई २ अर्ब घाटा भयो । सरकारी तहबाट नै घाटा भयो, त्यसमा निगमको मात्र दोष थिएन ।
त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास बालुवाटारमा उनकै उपस्थितिमा बोर्ड बैठक डाकिएको थियो । लाउडा एयर ल्याउने कुरा त्यहाँ बसेर निर्णय भएको थियो । त्यहाँ धेरै पार्टीका मान्छे संलग्न थिए । त्यसैले, तत्कालीन समयमा सरकारकै दबाबले निगमलाई २ अर्ब घाटा पारेको हुनाले उक्त घाटा सरकारले बेहारेर निगलाई घाटामुक्त पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यस्तै, धमिजा काण्डले पनि निगम थिलथिलो पा¥यो । ती विभिन्न कारणले हामी देख्दाखेरि धराशायी भएको देखिएको मात्र हो । तर, हामीले अहिलेसम्म यही अफिसमा कमाएर यहीबाट तलब खाइरहेका छौं । ऋण गरेर जहाज किन्ने कुरा स्वाभाविकै हो । पहिले पनि किस्ताबन्दीमै लिएको हो ।
० चिनियाँ जहाजले नाफा दिन सकेन भन्ने कुरा के हो ?
– चिनियाँ जहाजहरू त दोस्रो लाउडा नै भएका छन् । त्यसका पाटपुर्जाहरू धेरै महँगा छन् । एकपटक बिग्रिसकेपछि १५–२० दिन चल्दैन । यी जहाजले हाम्रो विश्वसनीयता गुमाउने काम गरिरहेको छ । त्यसका कारण हामीले समय–तालिका लागू गर्न सकिरहेका छैनौं । यात्रुले बुक गरिसकेको अवस्थामा अकस्मात् बिग्रिदिन्छ । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका कुरासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ, तर जे सम्बन्ध भए पनि यसका कारण निगम पुनः धराशायी त हुनुभएन ।
० निगमले गरिरहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा अन्य निजी कम्पनीले लिनेदिने कुरा पनि आएको थियो, के हो वास्तविकता ?
– निगमले राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएको हैसियतले यो सेवा पाएको हो । सरकारी संस्था भएको हैसियतले यो निगमले नै पाउनुपर्ने अधिकार हो । अहिले पनि आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट निगमलाई नै यसको जिम्मेवारी दिइसकेको छ । पाँच–पाँच वर्षमा यो नवीकरण हुँदै आएको छ । निगमसँग नै पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण यसका लागि नै छन् । त्यो खरिद गर्दा पाँच वर्षका लागि अर्बौं लगानी गरिएको हुन्छ । त्यस हिसाबले पनि यो काम निगमले नै गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय खरिद गरिएका उपकरणको पैसा उठ्न पनि कमसेकम १० वर्षका लागि नवीकरण गरिदिनुपथ्र्यो ।
० चुनावी प्रचारका क्रममा बोनस खुवाउन पहल गर्ने भन्नुभएछ, यसरी घाटामा गएको संस्थाबाट बोनस खान मिल्ला ?
– हामीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको निगमको खुद नाफाबाट हुने बोनस ऐनअनुसार कर्मचारीले पाउने हिस्सा बोनसबापत छुट्ट्याउनुपर्छ भनेर माग गरेका हौं । नाफा नभईकन बोनसको माग गरिँदैन । र, अहिलेसम्म खाइएको पनि छैन । सरकारले जबर्जस्त निर्णय गरेर लादेर घाटा पार्ने काम गरेको छ । त्यस अवस्थालाई पनि कर्मचारीहरूको मेहनतले क्षतिपूर्ति गरेर नाफा कमाएका छौं भनेदेखि बोनस रकम छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । लाउडाको २ अर्ब घाटा सरकारका कारण भएपछि त्यो घाटा सरकारले बेहोरिदेओस् भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसो भए हामी बोनस खान सक्छौं ।
० पहिलो माग के हुनेछ, व्यवस्थापनसँग ?
– चुनावअघि हामीले ४२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थियौं । अब यी मागहरू लिएर व्यवस्थापनसमक्ष जान्छौं । अन्य विभिन्न माग भए पनि पहिलो कुरा हामीले संस्था कसरी सुधार गर्ने भन्ने नै हुन्छ । संस्था नसुध्रीकन हाम्रो माग बाहिरबाट पूरा हुने होइन । अब हामीलाई सरकारी तहबाट हुने हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ । त्यो नहुनेबित्तिकै हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्न सक्षम हुन्छौं ।
० सरकारी हस्तक्षेप, ओभर स्टाफिङ र राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भएर निगम बिग्रिएको भन्छन् नि ?
– पहिले हामीकहाँ २४ सय कर्मचारीको दरबन्दी थियो । अहिले घटेर कर्मचारीहरू लगभग १ हजारमा सीमित छन् । करारका कर्मचारीहरू भनेको सीमित संख्याका एयर होस्टेजहरू हुन् । सहायक तहमा केही राखिएका छन्, जुन विज्ञापनबेगर कुनै हालतमा राख्न पाइँदैन भन्दाभन्दै पनि राखिएका हुन् । हाम्रै पार्टीका यसअघिका पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेललाई पनि हामीले यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले एकजना मान्छे पनि भर्ना गर्नुभएको छैन । हरेक महिना अवकाश हुँदै गएपछि अवश्य पनि काममा कमी आइहाल्छ । त्यसकारण, पछिल्लो समय १ सय ४८ जना कर्मचारी मागिएको थियो । जुन विज्ञापनको नतिजा केही समयपछि निस्किएला । त्यो नतिजा आएपछि अझ सहज हुन्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा समाप्त पार्ने माफियाको योजना
जोय पपैया सन्को ब्राण्डएम्वेसडरमा अदिती बुढाथोकी
सिलवालको नाममा रेड कर्नर नोटिसप्रति आपत्ति
यो अन्तिम युद्ध होइन
जनकल्याण उच्च माविको स्वर्ण महोत्सव तयारी
आईसरको अत्याधुनिक टिप्पर प्रो ८०३१ बजारमा
गठबन्धनबाट ओली निर्विकल्प प्रधानमन्त्री
चन्द्रागिरीको करोडौंको ढुङ्गा लिलाम गर्न नदिइने
वैकल्पिक ऊर्जामा भुजेलको इसारामा धिताल
आर्थिक लाभका निम्ति व्यापक सरुवा
एनसेलले बढायो सापटी सेवा
टेलिकम कामिनीको दुहुनो गाई
मन्त्रीको निगाह पाएपछि…
काठमाडौं । कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग, कहिले ताहाचल कार्यालय र कहिले मन्त्रालयमा- ...
सामान्यलाई भ¥याङ बनाउँदै सहचारी
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको निजी सचिवलायवाट- ...
अर्थमा ‘ज्वाइँ राजा’को रजगज
काठमाडौं । अचेल अर्थ मन्त्रालयमा एक जना मानिस राम्रै कार्यकक्षमा बसेर कर्मचारीहरूलाई- ...
ललितपुरका यौन अखडामा प्रहरी रमिते
काठमाडौं । पछिल्लोपटक ललितपुर क्षेत्रमा प्रहरीको संरक्षणमै यौन धन्दा खुलेआम भइरहेको छ । तर, प्रहरीले भने थाहा नपाएझै गरेर कुनै कारबाही चलाएको छैन । काठमाडौं प्रहरीले केही दिनअघि- ...
स्वतन्त्र र स्वच्छन्द जीवन बाँच्नेमा पर्थिन्, अमृता प्रितम । हिन्दीका गिनेचुनेका नारी स्रष्टा प्रितमले लेखेकी आत्मकथा ‘रसिदी टिकट’ आजपर्यन्त रुचिपूर्वक पढिने आत्मकथाको लहरमा- ...
सरल, बोधगम्य र शालीन शब्दहरू बिछ्याउँदै कविता लेख्नेमा पर्दछन्, बोधराज पौडेल । काठमाडौं वा अरू सहर–बजारमा बस्ने कविहरू कविताको खेतीभन्दा धेरै ‘पब्लिसिटी’ को धन्दामा निर्लिप्त- ...